Jiri batrị a na-ebugharị gị were batrị gị Akụkọ akụrụngwa
Dị ka ị maara nke ọma, Elon Musk abụghị naanị na-elekọta ụlọ ụgbọ ala eletriki ọgbara ọhụrụ - ọbụlagodi gwongworo - kamakwa usoro ịnye ọkụ zuru oke maka ụlọ ma ọ bụ ụlọ elu igwe. Na mgbakwunye, Tesla - nkewa ụgbọala - nwere ọdụ na "Superchargers" ha a ma ama, ụlọ ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa chaja.
Otú ọ dị, ọ chọghị ịnọ ebe ahụ ma họrọ ịmalite ngwaahịa dị njọ nke ahia ahia na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke ụlọ ọrụ ahụ. Ngwaahịa ikpeazụ ga-esonye na katalọgụ bụ Naa Powerbank. Ọ bụ a ọnụ ọgụgụ mmeputakwa nke otu n'ime ndị Superchargers ga-eje ozi ma na-ana ndị iPhone ma ọ bụ iPad, nakwa dị ka ihe gam akporo mobile.
Ike nke batrị a na mpụga adịghị oke. Dị ka e kwuru na teknuzu e ji mara nke ngwaahịa anyị ga-enwe 3.350 mAh ikike. Ọzọkwa, dị ka anyị gwara gị, Nke a ma ọ bụ Powerbank obere batrị ga-enwe njikọta enwu n'otu akụkụ, ma na nke ọzọ anyị ga-enwe eriri nwere ọdụ ụgbọ mmiri microUSB. N'ezie, anyị amaghị ma ọ bụrụ na agbakwunye njikọ USB-C, otu n'ime ụkpụrụ ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ na ngwugwu ahịa. Ya mere, ọ ga-abụ ọrụ maka inye ume na nnukwu ego nke Ngwa. Akụkụ ndị a na-eme ka eriri eriri si na ọdụ ụgbọ elu Supercharger mbụ.
N'aka nke ọzọ, Tesla mpụga batrị nwekwara akara ngosi ebubo; Yabụ, ị ga-ama mgbe niile ihe bụ ọnọdụ nke ngwa esịtidem batrị. N'ikpeazụ, Elon Musk Powerbank na-egosi ya n'ime igbe mara mma nke nwere agba ojii na ọbara ọbara na ọnụahịa dị dollar 45 (ihe karịrị 38 euro na ọnụego mgbanwe ugbu a). N'ezie, o doro anya na ọ ga-enwe ọganiihu na n'oge ahụ egosiri na ọ gwụla ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Were batrị a na-ebugharị ebugharị na ngwaọrụ gị site na Tesla